Mormiin Magaalaa Asaboot ittti fufeeti jira. – Welcome to bilisummaa
Mormiin Magaalaa Asaboot ittti fufeeti jira.
Ummanni gandoota aanaa sanii cufarraa walitti bahe eda walgahee murtii dabrsee jira 1) Qaraxa hin kafallu 2) bulchiinsa mataa keenya jaarranna kan jedhani. Yeroo ammaa hirira godhaa jiran. Poolisiin federaalaa dhukaasa itti banee jira. Haga ammaa namni tokk madaayee jira. Garuu hiriirri itti fufe jira.
Previous How Ethiopia’s Largest Lender Almost Crippled The Banking System
Next Oromo TV: Malli Maali